तिम्रो विवाह कहिले? | Suvadin !
6.2k 22 0
लेखक खेमा बस्नेत।
फेरी पत्रकार सरले भन्नुभयो कुरा त ठूलाठूला नै गरेउँ तिमीले तर, यथार्थमा यस्तो हुँदैन तिमीले सोचेको विचारमा सहमत हुने समाजको निमार्ण अझै भएको छैन । मैले भने, त्यो समाजको निमार्ण म जस्तै सोच भएकाले गर्नछन् नि सर ? केटीको जीवनमा कसै केटासगँ नाम जोडिएर आउँछ भने भोली अरूले विवाह गर्ने मान्दैनन् । तिम्रो पनि...केटासँग नाम चलेको छ त । त्यसैले विवाह समयमा नै गर । के म केटी हुँ भन्दैमा कुनै केटासगँ बोल्न नपाउने ? हिड्न नपाउने ? कोही केटासँग हिड्दैमा त्यो मेरो ब्वाेइफ्रेण्ड भैहाल्ने ? जोसँग विचार मिल्छ त्यो साथी बन्छ चाहे त्यो केटा होस् वा केटी ।
तपाईको सोचबाट चल्ने कलमले समाज परिवर्तन गर्ने छैन । त्यसपछि म आफ्नो बाटो लागे ...।